Faalayn Ku Saabsan Sababta Itoobiya U Samaysanayso Ciidamo Badeed – somalilandtoday.com
Faalayn Ku Saabsan Sababta Itoobiya U Samaysanayso Ciidamo Badeed
Markii ay Eritrea xornimada qaadatay sanadkii 1993-kii, Itoobiya waxay noqotay dal aan lahayn xeeb iyo bad toona, waxayna qaadday tallaabadii la filan karay oo ahayd in la kala diro ciidammadii badda.
Ra’isulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan taleefishinka dalkaasi ka yidhi “Waxaan dhisaynaa ciidammo xoog badan oo badeed, kuwaas oo ugu xoog badan Afrika”.
Wakaaladda wararka ee Fana ayaa Ra’isulwasaare Abiy kasoo xigatay in uu yidhi in ciidammada ay la jaanqaadayaan waxyaabaha kasoo kordhay adduunka, islamarkaasna
sameeyaan isbadalada loo baahanyahay.
Markii Itoobiya iyo Eritrea ay dagaalameen, waxaa dhacday in Itoobiya aanay isticmaali karin dekada Eritrea si la mid ah sidii hore loo samayn jiray, sidaasi awgeed, Itoobiya waxa ay raadsatay wax ay ku badalato.
Dhawaan waxa ay Itoobiya heshiis la saxeexatay Jabuuti, kaas oo ay ku heshay saami ka mid ah dekad halkaas ku taala. Dekadaha Jabuuti waxaa hadda kasoo dega 95% waxa ay Itoobiya soo degsato ama dhoofiso.
Waxaa jira qad tareen oo isku xidha labada dal kaas oo dhan 759 km, kaas oo sahlay in badeecadaha iskaga kala gooshaan labada dhinac.
Balse Itoobiya kuma qanacsana sida ay Jabuuti wax uga jiraan, tusaale Roba Megerssa Akawak oo ah madaxa wakaaladda Xamuulka iyo adeegyada daabulaadda Itoobiya ee ESLSE ayaa wargeyska Blooomberg u sheegay in Itoobiya ay ka walwalsantahay saldhigyada ciidammada shisheeye ee Jabuuti ku yaala. “Waxaan ka cabsanaynaa in Jabuuti xitaa ay go’aan ku yeelan weydo waxa ka dhacaya gudaha dalkeeda, oo lagala wareego awoodda, tanina waa halis soo foodsaartay Itoobiya” ayuu yidhi Roba.
Itoobiya waxa ay heshiisyo la saxeexatay Suudaan iyo waliba Jamhuuriyadda Somaliland, halkaas oo dekada Berbera ay Itoobiya ku leedahay 19% saamiga.
Hadalkiisa ayuu ka dhabeeyay kadib markii uu ogolaaday go’aankii guddiga dhexdhexaadinta labada dal, kaas oo ahaa in Itoobiya ay ka baxdo magaalada Badme.
Balse si kasta oo uu u hagaago xidhiidhka labada dal, ma muuqato saansaan ah in ay soo dhowdahay in Itoobiya ay dekada Casmara ugu ugu tiirsanaan karto sidii hore oo kale.
Mr Birhanemeskel ayaa yidhi “Waa in dalalka geeska Afrika loo mideeyaa qaab dhaqaale, ciidammo badna mashruucaas ayuu qeyb ka yahay”.
Waxa uu xusay in dalalka Afrika badankood aanay lahayn saldhigyo ciidan bad oo ku filan, kuwa lehna ay yihiin dalalka shisheeye ee xoogga baddan soo dul dhigay gobolka.